Hummus ကုလားပဲ paprika - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ "Hummus ကုလားပဲ paprika
Tele RELAY တစ်ခု4သြဂုတ်လ 2019
Hummus ကုလားပဲ paprika အရှေ့အလယ်ပိုင်းတစ်ဦးအနိမ့်ကယ်လိုရီစာရွက်ဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်းစာရွက်မြေပြင်နှမ်းမျိုးစေ့များ, သံလွင်ဆီနှင့် condiments နှင့်အတူကုလားပဲရောစပ်ခြင်းဖြင့်ပြင်ဆင်သော်လည်း, ဒီဗားရှင်း paprika ၏သိမ်မွေ့အရသာထပ်ထည့်မှအဆိုတင်သွင်း။
ဘယ်လိုကြိုးစားနေကော? အဘယ်အရာကိုဒီစာရွက်ထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်အရသာနှင့်စွယ်စုံဖြစ်ပါတယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျနော်တို့ကတခြားကျန်းမာတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူအရသာကွဲပြားရန်သင့်အားဆုံးမဩဝါဒပေးချင်တယ်။ သင်သည်သင်၏နေ့လည်စာသို့မဟုတ်ညစာစဉ်အတွင်းခံစားနိုငျမူရင်းပန်းကန်လိုပဲ။ ၏မှတ်စုတစ်ခုယူပါ!
အဘယ်ကြောင့်သင် paprika နှင့်အတူကုလားပဲ hummus ကွိုတငျပွငျဆငျသင့်သလဲ
ကုလားပဲ hummus ၏အခြေခံပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။ ပဲပင်၏ဤအမျိုးမျိုးက၎င်း၏ကြီးမားသောစည်းစိမ်ဥစ္စာအားဖြင့်ခွဲခြားထားပါသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအာဟာရများ။ သငျသညျအကြောင်းပြချက်အိမ်မှာနေတဲ့အရသာ hummus ကုလားပဲ paprika ပြင်ဆင်ထားရန်လိုလျှင်ဒီတော့သင်ကအစားအစာကိုသင်အောက်ပါဆောင်ခဲ့ဦးမည်ကြောင်းသိသင့်:
ထို့အပြင်ခုနှစ်, Hummus တစ်ပန်းကန်ဖြစ်ပါသည် hypocaloric အရာသည်အလွန်တစ်သက်သတ်လွတ်သို့မဟုတ်သက်သတ်လွတ်အစားအစာကိုလိုက်နာသူတွေကိုအကျိုးပြု။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပရိုတိန်း၏၎င်း၏အဆင့်မြင့်စားသုံးမှုနှင့်အတူကြောင့်အာဟာရအစားအသောက်များတွင်ဖြည့်စွက်အဘို့စုံလင်သည်။ တကယ်တော့ဒီစာရွက်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့ရှာဖွေနေမည်သူမဆိုကမွေးစားရပါမည်။
hummus စာရွက် paprika chickpeas
hummus ၏အာဟာရအကျိုးခံစားခွင့်ကိုခံစားဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု 100% ကျန်းမာပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူအိမ်မှာကကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်အစဉ်အလာစာရွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်အရသာကွဲပြားဖို့ကျနော်တို့ paprika နှင့်အတူအတူသယ်မည့်အိတ်လုပ်တင်ပြသည်။ ဦးအလုပ်လုပ်!
2 ခွက်ချက်ပြုတ်ကုလားပဲ (400g)
နှမ်း၏2လက်ဖက်ရည်ဇွန်း (10 ဂရမ်)
1 လက်ဖက်ရည်ဇွန်းဇီ (5g)
3 ဇွန်းသံလွင်ဆီ (45 ml)
ရေ 1 ဖန် (200 ml)
စတင်အဘို့, ချက်ပြုတ်ကုလားပဲ ရေ၌အနည်းငယ်ပျော့ပျောင်းအထိပါပဲ။ အကောင်းဆုံးကတော့, သူတို့ကိုချက်ပြုတ်မတိုင်မီအကြောင်းကို 12 နာရီစိမ်ကြကုန်အံ့။
အဆိုပါ guacamole ဆင်တူသော creamy texture သည်အထိအနည်းငယ်အချိန်လေးရောမွှေပါ။
သင်မျှော်မှန်းထားရလဒ်ရသောအခါ, နှမ်းမျိုးစေ့များနှင့်သံပုရာရည်ကိုထည့်ပါ။ သင်ဆန္ဒရှိအဖြစ်ကိုလည်း, ဆား, ငရုတ်ကောင်းထည့်ပါ။
အဆိုပါပါဝင်ပစ္စည်းများအဆိုပါကုလားပဲမုန့်နှင့်အတူကောင်းစွာရောနှောနေခြင်းနိုင်အောင်ထိုအခါကောင်းစွာရောမွှေပါ။ ဤအချက်မှာ, မြေနှင့်အနည်းငယ်သောက်သည် paprika ထည့်ပါ။
နောက်ဆုံးတွင် hummus ကုလားပဲရေခဲသေတ္တာထားအအေးခွင့်ပြုပါ။ ဒီပန်းကန်မျိုးစုံမြည်းစမ်းခြင်းမပြုမီ, အခန်းအပူချိန်အနည်းဆုံးအစဉ်အလာ 30 မိနစ်အအေးခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
toasted မုန့်နှင့်အတူဤပန်းကန်အတူလိုက်ပါဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်, မုန်လာဥနီ အခြားသူတွေအကြားသို့မဟုတ်အညိုရောင်ဆန်။
ကျန်းမာအစားထိုး hummus အတိုင်းဤသုံးပါ
ဤသည်လွှတ်ပေးရန်နှင့်အခြားကုလားပဲ hummus ဗားရှင်းဒါကျန်းမာမဟုတ်အချို့သောကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအစားထိုးအသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည်။ ယင်း၏ creamy texture နှင့်အရသာမှုကြောင့်, ဒါကြောင့်လည်းအများအပြားကယ်လိုရီဖြည့်စွက်ခြင်းမရှိဘဲအများအပြားဟင်းလျာများ၏အရသာကိုတိုးမြှင့်ဖို့ကူညီပေးသည်။ အဆိုပါကုလားပဲ hummus နှင့် paprika add ဖို့သတိရပါ:
သင့်ရဲ့ Devil ကြက်ဥမှာနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရကြက်ဥအနှစ်ကိုအစားထိုးရန်။
ကင်, မုန့်သို့မဟုတ် crackers နှင့်သင်၏ချက်ပြုတ်နည်းများမှာ။
Tortilla Taco သို့မဟုတ်မြေတပြင်လုံးဂျုံ။
စာဖတ်ခြင်းမပါဘဲမသွားပါနဲ့: hummus ရှာဖွေတွေ့ရှိ, ပြားချပ်ချပ်အာဟာရကြွယ်ဝသောလက္ခဏာ
ကုလားပဲနဲ့ paprika နှင့်အတူ hummus များအတွက်ဒီစာရွက်လည်းကျန်းမာဗားရှင်းရိုးရာစာရွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကတခြားပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူဤအအေးမုန့်ရဲ့အရသာအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်ဖြစ်သော်လည်း, paprika ကအလွန်အထူးထိတွေ့ပေးသည်။ လူအပေါင်းတို့သည်ပါဝင်ပစ္စည်းများကယ်လိုရီအတွက်အာဟာရများနှင့်အနိမ့်ကြောင့် သာ. ကောင်း၏သေး, ငါတို့သည်ကျန်းကျန်းမာမာစာရွက်များ၏ concept ကိုစောင့်ရှောက်။
သို့သော်ကပန်းကန်ပူးတှဲပါရန်နီးစပ်အာရုံစိုက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ သင်သည်များစွာသောအစားအစာများ hummus အတူလိုက်ပါနိုငျသျောလညျး, ကျန်းမာပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ကယ်လိုရီပိုနှစ်သက်။ ထို့ကြောင့်, အစား fries, မုန့်သို့မဟုတ်ကြက်သားအခဲပူးတွဲ၏, က wholemeal ပေါင်မုန့်သို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အတူစားသုံးဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
စူပါအလင်း hummus စာရွက်
သငျသညျ hummus အဘို့ဤအံ့သြဖွယ်စာရွက်ကိုမြည်းစမ်းခဲ့ကြပြီးတာနဲ့သူကအဲဒီနောက်ကိုတှနျးလှနျဖို့ခက်ပါတယ်။ hummus ပြင်ဆင်ထားရန်မည်သို့မည်ပုံလေ့လာပါ! Read more »
the post Hummus ကုလားပဲ paprika ပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား သင့်ရဲ့ကနျြးမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ.
မည်သို့ဆင်းရဲသား Neapolitan အဘိဓါန်ကွက်လပ်ကယ်လိုရီ - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ